Madonna pụtara na ụlọ wee tie mkpu maka ọrụ ebube (foto izizi) | Blọọgụ nke ekpere
Madonna pụtara n’elu ụlọ ma tie mkpu maka ọrụ ebube (foto mbụ)
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 15, 2020 Maggio 15, 2020
Clearwater - havefọdụ akpọwo ya ọrụ ebube ekeresimesi. N'ezie, ọ bụ ihe ngosi ekeresimesi.
Na Disemba 17, 1996, egwurugwu egwurugwu kporo akpukpo ahihia na enyo gi na mpụga Seminole Finance Corp. N'ebe ahụ ka ọ nọ, na-agbago akụkọ abụọ n'elu ụlọ ahụ na nkuku US 19 na Drew Street:
Onye ahịa a na-akpọ WTSP-Ch. 10, na ihe omimi akụkụ ahụ kọwara na ehihie akụkọ. N'ime awa ole na ole, ọtụtụ ndị mmadụ erukoro na ebe a na-adọba ụgbọala n'ofe Tampa Bay. N’etiti abalị, ndị uwe ojii gụọ opekata mpe 500 na igwe mmadụ ahụ.
Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke - ma ọ bụ opekata mpe ihe ọtụtụ kwenyere na ọ bụ ihe oyiyi dị nsọ nke nne nke Jizọs Kraịst.
Oké osimiri nke ndị ọbịa bịara, na-awachi n'okporo ụzọ na nso ebe a na-adọba ụgbọala. N'izu ndị na-eso ya, ihe karịrị narị puku mmadụ isii ga na-eme njem nso ma nọ ebe dị anya hụ ya.
Ha wetara ifuru na kandụl ọkụ. Ha kpere ekpere Ha bere akwa. Otu di na nwunye lụrụ di ebe ahụ.
“N'ime ụbọchị ole na ole, ndị gbagoro malitere ịkpọ ya Nwanyị nwanyị nke Clearwater,” ka onye na-ese Times Times Scott Keeler kwuru, onye kpuchiri ọdịdị ahụ na nseta ahụ afọ 23 gara aga.
Obodo ahụ aghaghị ịwụnye ụlọ mposi ndị nwere ike mbugharị na ụzọ, ebe ndị uwe ojii busoro ndị na-ere ahịa iwu na-akwadoghị na-anwa ire ndị ọbịa. Mgbe e mesịrị, ịsa ụgbọ ala dị nso ga-ere T-shirts nwere foto windo maka $ 9,99 (nke ga-abụ $ 16,38 na dollar 2019).
Wilma Norton, onye gwara akụkọ nke St Petersburg Times kwuru, "Ọ bụrụla ụdị akụkụ dị iche iche… ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njem ndị njem nlegharị anya n'okporo ụzọ Florida." "Mana ndị ahụ nọ ebe ahụ, ọkachasị n'isi ụtụtụ mbụ ahụ, ọtụtụ n'ime ha nọ ebe ahụ n'ihi na ha tụlere n'ezie ụdị ọrụ ebube ekeresimesi a."
N'afọ ndị gafeworonụ, ụdị ndị na-echetara ndị nke Nwa agbọghọ Na-amaghị nwanyị apụtawo n’ihe niile site na Sanwichi chiiz e ghere eghe ruo ná mkpọ chiri. N'afọ 1996, onye na-ere ahịa n'ụlọ ahịa kọfị Nashville kwuru na pọglị oro yiri mama Teresa.
“Onye nwe ya chebere Sanwichi. Puku kwuru puku mmadụ batara n'ụlọ mmanya ahụ ka ha hụ ya. Ha kpọrọ ya Nun Bun, "Keeler kwuru." Ana m echeta ndị nọ n’akụkụ Clearwater na-ekwu, "Haha, nke ahụ bụ ka mama Teresa na Sanwichi." "
Ọ bụ ezie na isiokwu ndị ahụ mekwara isi okwu nke mba, enwere ihe dị iche na windo Clearwater, Norton kwuru.
Ọ sịrị, "Ndị mmadụ welitere ụfọdụ n'ime ihe ndị a, mana n'ihi na ọ bụ ọnụnọ anụ ahụ na nke a na-adịgide adịgide, echere m na ọ dịịrị ya mfe ịbụ ụdị ebe nsọ na ebe a ndị mmadụ nwere ike ịga njem,"
Ọtụtụ ndị nta akụkọ TV na-agbasa site na ebe a na-adọba ụgbọala ka helikọpta akụkọ na-eti n’elu. Michael Krizmanich, onye nwe Seminole Finance Corp., gwara ndị Times na ndị nta akụkọ sitere gburugburu ụwa nwara ịkpọtụrụ ya.
Ndị ọbịa chetara nwaa ihe pụrụ iche.
Mary Stewart, onye ụkọchukwu nke Mgbasa Ozi maka Jesu Christian Center na Tampa na 1996 gwara ndị Times, “A na m eche na ọ bịara iji mee ka ndị mmadụ gee ntị na anyị. bi n’oge ikpeazụ. . . ijikere izute eze na-abata. "
Mary Sullivan gwara akwụkwọ akụkọ St Petersburg.
Ọ bụghị mmadụ niile kwenyere. Ngalaba Floridagbọ njem Florida wepụtara foto ụlọ ahụ site na nyocha ụlọ ala 1994 nke pụtara na-egosi na egwurugwu egwurugwu ahụlarị. Organizationsfọdụ nzukọ okpukpe lebara anya karịa ndị ọzọ.
"Ndị mmadụ kwesịrị igosipụta obi abụọ dị ukwuu," Joe Mannion, onye na-ekwuchitere archdiocese nke St. Petersburg gwara Times.
Trafficzọ njem na US 19 dị njọ nke na obodo ahụ nyefere ndị ọrụ iri atọ ka ha nyere ndị uwe ojii aka ijikwa igwe mmadụ na Afọ Ọhụrụ. Mgbakọ ahụ tụrụ ndị ahịa nke ụlọ ọrụ agbata obi ụjọ.
Echiche nke mmụọ dị ala gbasara ihe mepụtara onyonyo nke Madonna sitere na ndagiche nke mmiri ịgba na agbanye na iko ahụ.
"Enwetụbeghị m nke ọma tupu ma ọ bụ mgbe emechara." Frank Mudano, onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ ahụ bụ onye mere ụlọ ahụ, gwara Times. "Ọ bụ ihe ijuanya. Anọ m na-echepụta ụlọ kemgbe afọ iri anọ. "
Ekwenyere na Warren Weishaar, onye na-ahụ maka iko, kwuru.
Times kpọbatara onye ọkà mmụta sayensị ka o nyochaa enyo ahụ. Chemist Charles Roberts nyochara ihe ndị metụtara ya gụnyere isi ndị na-efesa ya. O nyere amuma kachasi nma: “nkwonkwo nke mmiri na ikuku, mmeghachi nke mmiri n’etiti iko na ihe”.
Ugly Duckling Corp., bụzi otu n'ime ụlọ ọrụ ụgbọ ala kachasị ewu ewu na mba ahụ, zụtara oghere site na Seminole Finance Corp. E mechara ree ya Ndị Ọzụzụ Atụrụ Kraịst na 2000. O doro anya na nnukwu ihe nkiri ahụ dị njọ maka azụmahịa. .
Na Mee 1997, vandals ahụ wụsara mmiri na Madonna, na-emebi ihe oyiyi ahụ. Ihe onyonyo a laghachiri n’ebube ya mbụ mgbe oke ikuku ghasịrị ụbọchị ole na ole.
N'afọ 2004, otu nwa nwoke gbara afọ 18 gbara mgba jiri sling na bọọlụ mebisịa elu windo.
Dabere na Atlas Obscura, a ka nwere ike ịhụ ogwe ndị obere ka fọdụ na-abụghị nke ụlọ ahụ, nke bụzi ọrụ ndị na-azụ ndị ọzụzụ atụrụ Kraịst.
← Na post gara aga Gara aga post:Youma sacrament abụọ nke ọgwụgwọ?
Ọzọ Post → Post ozo:Nrara nye Meri na Mee: daybọchị 15 “were ike n'ahụ”